Doorashada Soomaaliya oo mar kale dib loo dhigay - BBC News Somali
Image caption Doorashada Soomaaliya ayaa mar kale dib loo dhigay
Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Dadban ee Soomaaliya ayaa sheegay in doorashooyinkii lagu waday inay billowdaan Sabtidii la soo dhaafay dib loo dhigay muddo bil ah.
Hanaanka lagu soo xulanayo xubnaha baarlamaanka, Aqalka Sare iyo doorasahada madaxweynaha ayaa qaadan doonta dhowr isbuuc.
Ilaa iyo 14 kun oo ergo ayaa lagu wadaa inay soo xulaan xubnaha baarlamaanka inta u dhexeyso Oktoobar 23-10 ka Nofeembar ee sannadkan, sida uu shir jara'iid ka sheegay Gudoomiyaha Guddiga Hirgelinta Doorashooyinka Dadban ee Soomaaliya, Cumar Maxamed Cabdulle.
Maamul Goboleedyada ayaa soo gudbin doona xubnaha Aqalka Sare oo ka kooban 54 xubnood ugu dambeyn 10-ka bisha October.
Guddigu wuxuu sheegay n 23-da bisha Nofeember ay dhici doonto doorashada Guddoonka Labada Aqal ee Baarlamaanka.
Waxaa xigi doono doorashada madaxweynaha oo ay ka qeyb qaadan doonaan labada aqal, waxayna dhici doontaa 30-ka bisha Nofeember. Waxaa markii hore lagu waday in doorasahdaasi ay dhacdo 30-ka bisha October.
Guddiga ayaa sheegay in jadwalkii hore uu shaqeyn waayay ka dib markii ay soo baxeen caqabado isugu jira arrimo siyaasadeed, amni, dhaqalaaha doorashada iyo guddiga xallinta khilaafaadka oo aan weli shaqo galin.
Doorashooyinka Soomaaliya ayaa markii hore lagu waday inay qabsoomaan bishii August ee sanadkan.